Akụkọ - nhazi ọkwa nke Cardigan.
Centerlọ Ọrụ Nlele
Uwe Ọmụma nwanyị
Nhazi ọkwa nke Cardigan.
-Nke a kpara akpa
A makwaara dị ka nzukọ weft-level organization, otu-kwadoro nzukọ. Knitting agịga ndokwa: akpa Jersey na agịga zuru ezu na otu agịga bed. The akwa nwere nnukwu transverse extensibility na curling Njirimara, na ọ dị mfe na-ada iche mgbe akaghị gbajiri.
A makwaara dị ka akwa ọgịrịga, ọ bụ otu ụdị dịka 1 + 1 ọgịrịga na ọgịrịga 2 + 2. A na-ebu akwa na akwa akwa abụọ, triangles niile na-abanye n'ọrụ ahụ, ma akaghị omimi bụ otu. Knitting ndokwa: n'ihu na azụ agịga akwa na-mere ndokwa na zuru stitches.
-1 + 1 ọgịrịga kpaa
A makwaara dị ka ọgịrịga otu. Tinye na neckline, cuffs na hem.
-2 + 2 ọgịrịga kpaa
O nwere ogo dị elu na nhịahụ, ọkara nke ihe a na-ebu okpukpu abụọ ka nke nke akwa a kpara akpa.
-Siping Idling Organizationtù
Makwaara dị ka ribbed ikuku oyi akwa Ọdịdị, ọ bụ a ọtụtụ ihe mejupụtara Ọdịdị nke ribbed Ọdịdị na ewepụghị agịga Ọdịdị. Atụmatụ: Ntanetị ndị dị larịị n'ihu na azụ azụ abụghị ihe jikọrọ ya, na ọnọdụ dị n'elu, nke dị elu karịa anụ ahụ, na-ejigide njiri ọkụ dị mma, obere akụkụ mpụta, na ọdịdị siri ike karị.
Tucked ákwà na otu agịga bed elu, makwaara dị ka ewepụghị agịga abụba ifuru. Tuck nwere ike ịmepụta ụdị usoro dị iche iche dịka usoro ntupu, usoro na-enweghị atụ, na usoro ihe osise. N'ihi ịdị adị nke ogologo loops, a ga-emetụta ike nke akwa ahụ ma ọ dị mfe ịgbasa n'akụkụ.
-Fat Flower Organizationtù
Tù Ahịhịa Abụba bụ aha nkịtị nke huatù Jihua. Dị ka overhang kpụrụ tuck, elu na-etolite a convex ụkpụrụ, wdg E nwere otu-kwadoro tuck na abụọ-kwadoro tuck; enwere otu uzo na ahiri uzo; enwere otu nkpu-ogwu na otutu ogwu.
A na-akpọ aha sayensị nke usoro a na-agbagọ agbagọ. Site na imegharị akwa agịga ahụ, a na-etinye akwa ndị ahụ na akwa agịga abụọ.
-Double azu n'ọtụtụ anụ ahụ
A na-akpọkwa anụ ahụ okpukpu abụọ nke anụ ahụ na-adịghị akpa, a na-akpọkwa ya agịga yuanbao abụọ. A kpara ya n’elu akwa agịga okpukpu abụọ, isi ihe ya bụ akụkụ ihu abụọ. Atụmatụ: Ugboro abụọ azụ akwa dị mfe iji na-agbatị ma na-agbanwe na ntụpọ transverse, nke na-ebelata njigide ọdịdị nke uwe ahụ, mana ejiri njigide ọkụ na-eme ka ọ dị mma, akwa ahụ nwere mmetụta na oke mmetụta. Ọ na ọtụtụ-eji agịga-akpa.
Ngwurugwu jacquard bụ ụdị akwa a na-ahọrọ yarn na usoro ahụ ma mepụta loops n'oge ụfọdụ dịka ihe achọrọ nke ụkpụrụ ahụ. Mgbe eriri ahụ adịghị agba, ọ na-ese n'elu azụ nke akwa ahụ wee nwee ike ịkpa ya n'otu akwa agịga. . Atụmatụ: A na-eji akwa akwa akwa, ọ naghị adị mfe nrụrụ, agbatị gbakwunyere obere dispersibility, ma nwee mmetụta agba dị mma.
-Efu ifuru nzukọ
Aha sayensi nke ifuru efu bu ihe omuma, nke a makwaara dika ihe nkpuru osisi peach, nke enwere ike ichota na akwa akwa. A na-ahazi agịga ndị a kpara akpa, na otu jersey dị ka ihe owuwu bụ isi, a na-ebufe nsị ahụ dị ka ụkpụrụ ahụ si dị. Ọ na ọtụtụ-eji mmanya stitch nakawa etu esi.
Post oge: Apr-19-2021
AdreesịIwuli 19, Onye Ndú Classic, 258 Shengpu Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu ógbè, China.